Si Toos ah Soo Saaraha Soo Saaraha Soo Saaraha Biyaha Warshadeysan iyo Warshad Toos ah | Sidaada
Qalabku wuxuu adeegsanayaa unugga soo-kabashada ee gaarka ah si uu uga soo nuugo kuleylka biyaha qaboojiyaha matoorka ilaa tuubada qiiqa, ka dibna aamusiyaha, ugu dambeyntiina beddelka biyaha la qaboojiyey U isticmaal kuleyl la soo uruuriyey si aad ugu daadisid biyaha badda iyo uumiga biyo nadiif ah qalajiyaha marxaladda badan. Biyaha la helay ee tayada sare leh uma baahna dhammaan noocyada xuubka osmosis-ka iyo tamarta korantada.
Super Silent Sea Water Salinaynta Genset
Shidaalka la adeegsan karo: Gaaska dabiiciga ah, gaaska Coalmine, hawada cusbada leh.
Nidaamka Miyuu caymi karaa isku-kalsoonaanta nidaamka sahayda.
Isticmaalka guud ee nidaamka soo kabashada kuleylka ayaa gaaraya 90%.
Kabadhka xakamaynta otomaatiga ah (iswaafajinta, qaybinta culeyska)
Soosaarayaasha shaqada si otomaatig ah ayey u wareegaan
Ilaalinta nabadgelyada, naqshad aamusan.
Super aamusiyaha Generator CCHP
Xusuusin: Nidaamka isku dhafan ee isku-dhafan ee kala-duwan ayaa laga dooran karaa aaladaha soo socda.
Hordhac - matoor gubasho gudihiisa ah oo dejin kara biyaha badda.
Mabda ': aaladu waxay isticmaashaa unugga soo kabashada gaarka ah si ay uga soo nuugto kuleylka biyaha qaboojiyaha mashiinka ilaa dhuumaha qiiqa, ka dibna aamusiyaha, iyo ugu dambeyn bedelka qaboojiye biyaha. U isticmaal kuleyl la soo uruuriyey si aad ugu daadisid biyaha badda iyo uumiga biyo nadiif ah qalajiyaha marxaladda badan. Biyaha la helay ee tayada sare leh uma baahna dhammaan noocyada xuubka osmosis-ka iyo tamarta korantada.
Mashruuceena: Wada-soo saar biyo iyo koronto
Wada-soo-saaridda tamar-koronto ayaa inta badan loola jeedaa wax-soo-saarka iyo wada-bixinta biyaha badda iyo korontada la macaaneeyay.
Maaddaama qiimaha biyaha macaan ee badda ay ku xiran tahay qiimaha korontada iyo isticmaalka uumiga in badan, jiilka tamarta dhaliya ayaa isticmaali kara uumiga iyo korantada warshadda tamarta si ay u siiso awood warshad biyaha macaaneysa, si loo ogaado ka faa'iideysiga tamarta iyo in la dhimo kharashka biyo macaanida. Inta badan dhirta macaaneyntu waxay kudhisan yihiin dhirta korontada, qaabka ugu weyn ee dhismaha mashaariicda miisaanka ballaaran.
Habka loo abuurayo korantada, noocyada dhaliyaha gubashada gudaha waxay abuuri doonaan kuleyl badan sababtoo ah gaaska qiiqa ah ee laga soo saaray gubashada iyo isqabqabsiga ka dhashay dhaqdhaqaaqa. Kaliya kuleylkaan aan la isticmaalin, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay luminta awood waxtar leh mashiinka gubashada gudaha ee qaboojinta (sida taageerayaasha korontada iyo matoorrada qaboojiyaha matoorrada). Nidaamka qaboojinta ee matoorada gubida gudaha sida caadiga ah wuxuu qaataa laba habab, mid waa hawo qaboojinta kan kalena waa biyo qaboojinta. Labada nooc ee qaboojinta waxay lumiyaan xoogaa xoog ah waxayna ku dartaa qiiqa kuleylka. Guud ahaan, saamaynta qaboojinta oo ka wanaagsan iyo waqtiga hawlgalka dheer, koronto-dhaliyeyaasha badankood waxay adeegsadaan habka qaboojinta biyaha.
Hal-abuurnimadeennu waxay ujeeddadeedu tahay yaraanta matoorrada gubashada gudaha ee jira, waxayna bixisaa jaangooyooyin gubanaya gudaha ah oo isticmaali kara biyaha badda si loo qaboojiyo qalabka koronto-dhaliye ee gudaha iyo uumiga u sameeyo biyo macaan, si loo gaaro ujeeddada ilaalinta tamarta iyo deegaanka ilaalinta.
Hal-abuurka kaliya uma baahna taageere koronto, marawaxadaha hiitarka iyo koronto-dhaliye, wuxuu yareynayaa gubashada gudaha soo-saarista isaga laftiisa wuxuu dejiyaa isticmaalka tamarta qaboojinta, wuxuu hagaajiyaa awoodda wax ku oolka ah ee soo saarista naaftada, iyo sidoo kale kuleylka gaaska qashinka dhaliya korantada, iyo soo saarista isku dejiso inay sameyso geedi socodka shaqada waxay isku dayeysaa inay isticmaasho kuleylka ka dhashay muranka, isticmaalka naaftada soo saarta noocyada kuleylka qashinka si loo kululeeyo biyaha, hal dhinac mashiinka ku faafitaanka kuleylka, dhanka kale si loo helo biyo qallalan iyo kuleylka biyaha cusbada. , shaqaysaa, Waxay si gaar ah ugu habboon tahay jasiiradaha, maraakiibta badda iyo meelaha kale ee biyaha macaan ay ku yar yihiin.
Hore: 15kva-500kva Dajisaa Generator Gaaska Dabiiciga / Aamusan
Xiga: Isku dar Qaboojinta, Kuleylka iyo Awood dhaliyaha Nidaamka
MUUQAAL AWOODA CODKA SHAQAYNTA TALO CAPACOTY soo saarista AWOODA BIYAHA SAYLISKA
KW / KVA V HZ KW / H L / PER SAACAD